Ny tantaran'i Red Riding Hood dia teo ny favoris ho maro amintsika, raha mbola zaza izahay. Ankehitriny efa lehibe ny olon-dehibe, mbola kely ny fihetseham-po firaiketam ity tantara. Izao no NetEnt Manantena hitrandraka eo amin'ny fampandrosoana ny Fairy Tale Legends: Red Riding Hood slot lalao.
Net fialam-boly dia efa nisy hatramin'ny 1996 ary monina any Soeda. NetEnt no voalohany developer fa namorona an-tserasera Casino java-mampiasa ny sehatra. Na izany aza, efa nanomboka nifindra tany mandroso kokoa sehatra toy ny HTML5 sy Flash teknolojia. Izany developer efa nitahy ny lalao izao tontolo izao miaraka amin'ny be dia be ny lalao nandritra ny taona maro. Ary tamin'ny lalao isan-karazany karazan-dahatsoratra, NetEnt Toa tsara indrindra mifototra amin'ny lalao slot-dalam-pandrosoana.
Fairy Tale Legends dia an-tserasera slot lalao dimy amby roa-polo reels paylines. Ity lalao ity tsara natao ary manana fototra miray feo izay ahitana ny cacophony izay mety ho ara-dalàna, rehefa mifindra amin'ny alalan'ny nahita ny ala. Araka ny Red Riding Hood mihetsiketsika ny alalan 'ny ala, dia afaka mandre ny chirping ny vorona sy ny rustling ny hazo; rehetra mampitombo ny vokatry ny lalao ity.
In Fairy Tale Legends ny kely indrindra fa ny mpilalao dia afaka miloka amin'ny iray kofehy ireny dia 0.2 raha ny loka indrindra dia 200. Isaky ny te staking be vola, misy Max Bet bokotra anilan'ny namoly boribory izay afaka hanampy anao hiala amin'izany lafiny.
Fairy Tale Legends manolotra fomba roa lehibe ny activating ny tombony endri-javatra. Iray amin'ireo fomba toy izany dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny harena ny tratra matoanteny. Rehefa izany tany izy amin'ny reels, mahazo tombony ianao telo safidy: Free Spins, Mitandrema ianareo, fandrao ny Wolf sy Coin Fandresena.
The Free kofehy ireny manome endri-javatra maimaim-poana anao folo spins. Afaka retrigger malalaka namoly raha vata-tanety ny harena eo amin'ny reels. Iray tratra manome harena anao maimaim-poana roa fanampiny spins. Amin'ny farany, izany no miteraka ny tanteraka ny dimam-polo maimaim-poana spins. Azo antoka, dimam-polo maimaim-poana spins dia ampy ho anao ny mahazo ny tsara vintana fiatoana.
Miaraka amin'ny Coin nandresy endri-javatra, ianao dia nomena ny kisendrasendra payout vola. Ny Mitandrema ianareo, fandrao ny Wolf Mahakasika anao endri-javatra mitarika Red Riding Hood ny alalan 'ny ala any an-tranon'ny Bebe. Raha tsy manao izany tsara ampy, dia mety ho lasa ny sakafo maivana ny ratsy lehibe Wolf.
Fairy Tale Legends dia tena mahaliana lalao tamin'ny tombony be dia be ny endri-javatra. Ny fitambaran'ny ny tombony sy ny lafin-javatra tsara tarehy ho endrika ny lalao tokana aman-tany.